Izithintelo zeKhamera ezinxibe umzimba wekhamera | Izisombululo ze-OMG
Ngosuku ngalunye oludlulayo, inani labemi beli lizwe liyanda. Oku kunika ukonyuka okuthe kratya kwetekhnoloji kunye nesayensi. Ngoku usuku, sinokubona uninzi lwamangeniso aphantsi asondele kuthi. Ezi zinto zokwenza ubomi bethu zibelula. Ngokwanda kwesixeko esikhulu, ngokuqinisekileyo kuya kubakho ukwanda okukhulu kwinqanaba lolwaphulo-mthetho. Amapolisa esiXeko kufuneka ajongane neengxaki mihla le. Kkulula kwabo, isayensi isincedile ngokusinika iikhamera zoMzimba oMele.
Ukusetyenziswa kweekhamera zaMandla abaLwelwe:
Iikhamera zeWorn Worn zinika uncedo olukhulu kubomi bemihla ngemihla yamapolisa. Ukuba sibona ngokucacileyo, ke sinokubona izibonelelo ezininzi kule mveliso. Iziphatha njengeliso lesithathu ngendlela ngokwandisa umbono wokubona umntu lowo. Ingathethwa kuba ngamanye amaxesha umntu akaqapheli iinkcukacha ezincinci ezijikeleze ngamehlo akhe. Kodwa ngekhamera, uyayibona loo nto ngokuphindaphindiweyo isenza kube lula ngaye ukubonisa iinkcukacha ezincinci.
Izithintelo kwiikhamera eziLwelwe ngumzimba:
Ngaphandle kwezibonelelo ezahlukeneyo ezibonelelwa yikhamera enomzimba, inezithintelo ezininzi.
Makhe sijonge ngokukhawuleza kwezinye iintsilelo zeeKhamera eziLawula uMzimba:
Ngenye yeyona ngxaki iphambili ijongene nesebe lamapolisa ngoku usuku. Esi sesona sithintelo sikhulu seekhamera ezinxibe umzimba. Ukurekhodwa kwedatha kwiindawo zolwaphulo-mthetho akunandaba kodwa ukudlala rhoqo ukurekhoda okude kufuna indawo ezininzi zokugcina. Oko kuyenza ukuba ibe sisithintelo esikhulu seekhamera ezinxibe umzimba ezingakwaziyo ukugcina idatha erekhodiweyo. Kuthekani ukuba bayatshabalalisa kwaye bacime idatha yakudala? Kuya kuba kubi kakhulu kwisebe. Sibona amatyala eminyaka ubudala evula ngequbuliso naphi na. Ke, abanako ukuthatha eli nyathelo kwaye bacime idatha yakudala. Bamele bagcine yonke idatha eyingxaki enkulu yesebe.
Siye sabona ukuba iikhamera ezinxibe umzimba zinomda kwizinto ezinokurekhoda ngexesha. Le nto isebenza njengomqobo omkhulu wekhamera. Iya kubangela ingxaki kumagosa. Masithathele ingqalelo amapolisa aya kwenza uphando. Ikhamera irekhoda lonke icandelo kodwa xa engena kweyona nto ibalulekileyo, umda wekhamera ugcwele kwaye uyeka ukurekhoda. Ke ngoko, oku kusikelwa umda okukhulu kweekhamera ezinxibileyo zomzimba ezinika ukungathandeki okukhulu.
Enye into echaphazela ukusebenza kweekhamera ezinxibayo ngumzimba lixesha leebhetri. Ngokwesiqhelo, iikhamera ezinxibe umzimba zidityaniswe kwicala elingaphambili leyunifom yamapolisa. Ingathi iyahlawuliswa ngalo lonke ixesha ke kufuneka iqhubeke ngebhetri. Ixesha leebhetri kufuneka lihlale ixesha elide. Kodwa kwimeko yokurekhoda okude okuhlala kuthatha ixesha elininzi, ezi khamera zihlala zehlisa iibhetri zazo. Ukutshaja ezi, iibhetri kufuneka zithintelwe ecaleni. Esi sisithintelo esikhulu kwezi khamera kufuneka zisonjululwe.
Iimvume kunye nokuSetyenziswa ngokufanelekileyo:
Owona mbuzo uphambili kumasebe ajongene nawo amapolisa ekuvavanyeni iiKhamera eziLungileyo zoMzimba yindlela yokuchonga ukuba loluphi uhlobo lwamagosa adibana nawo ekufuneka erekhodiwe.
Ngaphandle kokuhamba ngokuchanekileyo, amagosa ngewayesebenzise iikhamera zomzimba kwiindawo ekungafanelekanga ukuba azisebenzise kwaye ngaxeshanye, banokucima iikhamera zabo kwindawo apho kwakufuneka ukurekhoda. Oku ngekwabutshabalalisa ubungqina obuninzi obuvela kwindawo leyo.
Asinakutsho ngokuqinisekileyo ukuba oku kuthintelwa kwekhamera enxibe umzimba kodwa kungumda kwisebe elisebenzisa.
Zimbini iindlela eziphambili ezibonisiweyo kwizifundo ezininzi xa kufikwa kumba wokurekhodwa. Enye indlela kukucela amagosa ukuba arekhodishe konke ukudibana noluntu, kubandakanya kungekuphela nje ngexesha lokufowuna kodwa kwanakwiincoko ezingekho sesikweni kunye nabemi. NgokweForum yoluntu, efuna ukuba amagosa abhale phantsi yonke into esidibana nabantu angabeka phantsi amalungelo abucala oluntu kunye nokonakalisa ubudlelwane bamapolisa noluntu. Ke, le nto iphoselwe umva. Uninzi lwamangqina luyathanda ukungabonakali kwikhamera okanye kurekhodwe. Le iba yingxaki kumagosa ngelixesha ebuza imibuzo kubo.
Okwesibini, indlela eqheleke ngakumbi kukuba afune amagosa ukuba asebenze iikhamera zemizimba yawo kuphela xa ephendula iifowuni zenkonzo kwaye ngexesha lokunyanzeliswa komthetho imisebenzi enjengokubanjwa, ukukhangelwa, ukumiswa kwezithuthi, ukubuza imibuzo, kunye nezinto ezifuna ukwenziwa. Ukurekhoda kweziganeko kwindawo eyenzeke kuyo ulwaphulo-mthetho oluphilayo kufanele kuncede amagosa ukuba afake ingxelo engenziwayo kunokuba luncedo kuphando lwamva
Kuyacaca ukuba ukuvela kwetekhnoloji entsha kunye nenethiwekhi yoluntu kuyitshintshile indlela abantu abajonga ngayo ubumfihlo babo, kodwa ukurekhodwa okwenziwe ziikhamera ezigqunywe ngumzimba kungavumela ukusetyenziswa kobuchwepheshe bokubona ubuso.
Ukusetyenziswa kweekhamera zeWorn Worn zinika amagosa ithuba lokurekhoda iimeko ezibuthathaka, kodwa kunye nokurekhoda ngaphakathi kumakhaya abantu xa bebanjwa okanye besenza uphando. Ngokuphathelele koku, ezinye iiarhente zokunyanzelwa komthetho zithathe isikhundla sokuba amagosa anelungelo lokurekhoda ngaphakathi kwizindlu zabucala lo gama nje enelungelo elisemthethweni lokuba lapho. Oku, ngenxa yoko, kuphazamisa ubumfihlo babantu abaninzi nokungalungelanga amapolisa.
Ukushokoxeka kwamakhamera okunxiba emzimbeni wePolisa gqibela ukuguqulwa: NgoSeptemba 26th, 2019 by admin
2047 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-7 Namhlanje